Qof walba Waa Lagu Casuumay - Aasaaska Abaalmarinta - Jacaylka, Galmada iyo Internetka
Bogga ugu weyn Blog Qof Walbaa Lagu Casuumay
Waa maalin murugo leh markay dhalinyaradu ku qasban tahay inay arrimahooda gacmahooda ku qabtaan si ay iskaga ilaaliyaan shabakadaha ka hortagga kufsiga sida Qof Walbaa Lagu Casuumay. Ku guuldareysiga dowlada inay wax ka qabato xaddidaya marin u helka goobaha ganacsiga galmada ee caruurta iyo dhalinyarada ka yar 18 sano jir ayaa ah qeyb weyn oo wax ku biirisa dhaqanka badalaya ee dumarku dareemayaan inaysan amaan aheyn inay qeyb ka noqdaan. Qeybta 3 ee Sharciga Dhaqaalaha Dijital ah ee 2017 waxaa xayiray Dowladda saacadda kow iyo tobnaad ee 2019. Laakiin ma habsaamin in hadda la dhaqan geliyo. Waxay ku diyaar noqon kartaa 40 maalmood gudahood haddii ay jirto rabitaan siyaasadeed oo sidaas lagu sameeyo. Dhamaan ciyaartoydii ugu waaweynaa ayaa loo diyaariyey si ay u hirgeliyaan.
Porn waa dhibaato weyn
Wareysi BBC-da ah Chief Constable Simon Bailey si cad uga digay in filimada qaawan ay qalloocineyso sida dhalinyarada qaar ay u arkaan xiriirka. Wuxuu garwaaqsaday in tani ay noqotay "darawal" nooca akhlaaqda ee laga soo sheego khadka tooska ah.
Dhibaatadu waxay bilaabatay inay soo ifbaxdo tan iyo markii uu soo ifbaxay internet-ka sare ee xawaaraha sare ee 2008. Sidoo kale way ka qoto dheer tahay sida ay umuuqato, waana inaan la qaataa talo soo jeedinta fudud ee Simon Bailey si loo daaweeyo: si loogu dhiirigaliyo waalidiinta inay wadahadalkaas la yeeshaan caruurtooda maxaa yeelay porn maaha sida galmada dhabta ah, iyo in dhaqanka laga beddelo dugsiyada. Taasi waa talo aad u fiican laakiin nasiib xumo, kuma filna, dowladda waa inay iyaduna wax ka qabataa.
Xeerka Dhaqaalaha Dijital ah
Jawaabtiisu kuma filna 3 sababood dhammaantoodna waxay tilmaamayaan sababta aan ugu baahanahay Qaybta 3 ee Xeerka Dhaqaalaha Dijital ah ee sida ugu dhakhsaha badan loo dhaqan geliyo si macno leh looga jawaabo Casuumadda Qof walba.
Xalkiisa ugu horreeya wuxuu ku dhacayaa waalidiinta inay la hadlaan carruurtooda. Tani waxay iska indhatireysaa sida dhibaatada weyn ay tahay tan. In kasta oo waaliddiintu u baahan yihiin inay si joogto ah carruurtooda ugala hadlaan saameynta lebbiska, waalidiinta keligood lama tacaali karaan. Waxay gabi ahaanba ubaahantahay ficil dowladeed si looga hortago awooda aan sharciyeysneyn ee shirkadaha tiknoolajiyadda balaayiin-bilyan ah.
Marka labaad, waxaa jira caqabad weyn oo laga gudbi karo. Isticmaalka lebbiska waalidiinta naftooda iyo dareenka dambiga ee ku saabsan maareynta isticmaalka carruurtooda. Waxaa jira a maqaal fiican oo ku saabsan tan dhakhtarka maskaxda ee Victoria Victoria Dunckley ee ku saabsan isticmaalka shaashadda guud ahaan. Waalidiinta badankood waxay u maleynayaan inay u badan tahay inaysan iyaga waxyeello u geysan markay isticmaalaan da 'da' da'daas. Laakiin xaddiga iyo xoogga lebbiska ayaa maanta aad uga awood badan, marka la barbar dhigo xitaa 15 sano ka hor. Waxaan u baahanahay inaan waxbarno waalidiinta si dareen kasta oo haraaga oo dambi ah ama xitaa xishood kaliya loo yareeyo.
Seddexaad, ka fikirida hadalka waalidku sheegayo in porno aysan la mid aheyn galmada dhabta ah waxay la macaamilaysaa kaliya kala badh arinta ku saabsan sida galmada galmada ay maskaxda ilmaha u qabato. Qaboojinta galmada waxay ku dhacdaa laba siyaabood. Marka hore waxaa jira waxa loogu yeero 'miyir qaboojin'. Waxaa loo tarjumay "marka taasi waa waxa jinsi yahay". Taasi waa nooca Simon Bailey's uu soo jeediyo in hadalka waalidnimo uu wax ka qaban karo.
Nasiib darrose, waxay iska indhatireysaa nooca kale ee qaboojinta galmada, nooca 'miyir la'aanta', oo ah maskaxda isbeddelaysa ee maskaxda u horseedda baahi loo qabo heerar sare oo kacsanaan ah waqti ka dib sababtoo ah miyir beelid. Taasi waxay tarjumaysaa "Waxaan ubaahanahay porno si aan u kiciyo." Tani waa waxa asalka u ah dhibaatada. Ragga dhalinyarada ahi ma joojinayaan helitaanka farxadda bilaashka ah ee qasabadda maxaa yeelay gabdhuhu waxay ka cabanayaan inaysan jeclayn sida ay u saameynayso dhaqanka ragga ama sababta oo ah waalidiinta ayaa leh ma ahan sida galmada dhabta ah.
Dhibaatadan qotada dheer waxay u baahan tahay xal diiradda la saaro. Waxaan ka ognahay tobanaan kun oo warbixin is-sheegasho ah oo ka imanaya ragga ku jira websaydhka ka soo kabashada qaawan sida NoFap.com or RebootNation.org Dhibaatooyinka ka dhasha shaqadooda galmada ayaa ah waxa kaliya ee runtii helaya oo dareenkooda qabanaya. Warbixinnadani waxay muujinayaan laba arrimood oo muhiim ah oo ku saabsan saameynta porno.
Marka hore, rag badan ayaa dhahay markii ay ogaadeen waxa lebbiska u sameyn karo maskaxda, gaar ahaan sida ay u saameysay shaqada galmada, waxay 'aad' u dhiirigeliyeen inay isku dayaan oo ay joojiyaan. Marka labaad, waxay ahayd oo keliya ka dib Way joojiyeen, miyay ogaadeen in naxariistii ay u qabeen dumarka ay dib ugu soo laabatay waqti ka dib markii maskaxdooda ay bogsatay.
Markaanay ku fiiqin oo ku garaacno maskaxda kicintaas xoogga leh, arrinta cawdu waxay mar kale ku kori doontaa qaybta maskaxda ee ka caawinaysa inay la kulmaan waxa loogu yeero “aragtida maskaxda,” awoodda ay ku istaagi karto qof kale kabaha, dareemayso naxariis . Waxay sidoo kale u oggolaaneysaa isku xirnaanta neerfaha ee u dhexeeya maskaxda maskaxda (shucuurta) iyo maskaxda fikirka (kiliyaha hore) in la xoojiyo. Tani waxay qofka u oggolaaneysaa inuu biriiga ku dhejiyo dhaqan xumo, dhaqan xumo bulshada ka dhan ah. Markay maskaxdoodu bogsato, waxay noqdaan kuwo jir ahaan iyo maskax ahaanba ka xoog badan oo jecel inay wax soo saar yeeshaan.
Dabcan waxaa jira dhammaan cilmi-baaris rasmi ah oo rasmi ah oo laga helo noocyo kala duwan oo lagu taageerayo doodahan. Suugaanta neerfaha ee keli ah ayaa jira Daraasadaha 55 ku xidha isticmaalka sigaarka isticmaalka maskaxda ee la xidhiidha mukhaadaraadka. Fiiri tan video gaaban si loo fahmo sababta porno u tahay balwad iyo sida ay u saameyn karto dhalinyarada isticmaala. Kuwa siyaasiyiinta ah ee raadinaya caddayn cad, halkan waa kan jawaab ku socota Rabshadaha ka dhanka ah Haweenka iyo Gabdhaha Wadatashiga Istaraatiijiyadda dowladda ee 2020.
Xaqiiqdii qadkaan muranka ah wuxuu ku fiicnaan lahaa Sir Keir Starmer, hogaamiyaha shaqada, inuu ku daba galo baarlamaanka. Waalidiintu way jeclaan lahaayeen. Dadka intiisa badan "Casuumad Qof walba" ayaa iyaduna ka mahadcelin doonta. Yaanan ilaawin badankood waxay ku dhow yihiin inay noqdaan codbixiyayaal. Miyaynaan ka faa'iideysan karin haweenka siyaasiyiinta ah ee labada aqal si aan u taageerno ficil si aan uga ilaalino carruurteenna caafimaadka waxyeellada leh iyo saameynta bulshada ee xaddi xad dhaaf ah oo lulataaye adag?
Robert Halfon, gudoomiyaha Gudiga Xulista Waxbarshada ayaa ka jawaabey warka degelkan la dagaalanka kufsiga, Qof Walbaa Lagu Casuumay. Wuxuu ku baaqay "baaritaan buuxa oo madax-bannaan si loo ogaado sababta gabdho badan oo arday ah ay ula dhibaatoodeen xadgudub galmo iyo dhibaatayn".
Qoraalka ku saabsan xaaladda kufsiga ee Jaamacadda Edinburgh, Axadda Mary Sharpe ayaa ka soo xigatay iyadoo leh "waa maalin murugo leh oo ay dhalinyaradu ku qasban yihiin inay arrimahooda gacmahooda ku qabtaan iyaga oo adeegsanaya degello internet ah sida Cidkasta oo Casuumad loo fidiyey." Waxay tiri qayb ka mid ah eedda waxay ahayd ficil la'aan ku saabsan xaddidaadda da'da ee bogagga internetka ee ganacsiga galmada.
Maxaan weli ugu baahanahay weydiin kale? Waan ognahay in filimmada qaawan ay tahay darawal halis ah. Chief Constable Bailey, khabiir ku ah xadgudubka carruurta ee khadka tooska ah, ayaa sidaas yidhi. Caddaymaha rasmiga ah iyo kuwa aan rasmiga ahaynba way badan yihiin. Sidoo kale, runti waxaan haynaa sharci waxtar leh oo ay horay u soo mariyeen labada aqal oo kaliya u baahan fulin. Waxay noqon laheyd farqi weyn oo joogsi ah illaa iyo inta Sharciga Waxyeellada ee Online-ka ah ee wax ka qaban doona sawir-gacmeedka sawir-gacmeedka ee warbaahinta bulshada laga shaqeyn karo sannadaha soo socda. Ma aha kiis midkood / ama, laakiin labadaba / iyo qaybo sharci ayaa loo baahan yahay. Waxay wax ka qaban doonaan dhinacyada kala duwan ee dhibaatadan sii kordheysa. Waxaan u baahanahay inaan ilaalino caruurteena iyo dhalinyarada raga iyo dumarka hada. Tani Fiidiyowga 2-daqiiqad ayaa soo koobaya xaalada.
Dhanka kale, fiiri The Reward Foundation's tilmaamaha waalidiinta ee bilaashka ah ee filimada internetka. Tani waxay ka caawinaysaa waalidiinta inay bartaan wada sheekaysiga adag Waxaan sidoo kale leenahay 7 qorshe cashar oo bilaash ah loogu talagalay iskuuladu inay ka caawiyaan bedelida dhaqanka ka soo kabashada faraxumeynta iyo jawiga aaminaad badan ee ku xeeran cilaaqaadka dhow.
Fadlan hada tallaabo qaado.